192.168.8.1 - 192.168.0.1
Isango elizenzakalelayo le-IP 192.168.0.1 is esetshenziswa ngama-routers kanye nama-modem afana ne-D-Link router njengekheli elizenzakalelayo le-IP ukungena ngemvume kukhonsoli yomlawuli. Ukumisa izilungiselelo ezisezingeni eliphakeme nezisisekelo ze-192.168.0.1 zingasetshenziswa.
192.168.0.1 Ukungena Ngemvume
Izinyathelo zokungena ngemvume ku-IP 192.168.0.1
Uma ikheli le-IP elizenzakalelayo le-Modem / Internet Router lingu-192.168.0.1 kuleso simo, ngokungangabazeki ungayisebenzisa ukungena kukhonsoli yokulungiselela futhi neModem / Router yakho elawula izilungiselelo ze-Intanethi. Mane nje ungene ngemvume ku-192.168.0.1, landela imiyalo engezansi
Qiniseka ukuthi idivayisi inamathiselwe kusistimu kungaba ngaphezulu kwe-Ethernet Wire noma ngaphandle kwentambo.
Manje vula isiphequluli sewebhu osisebenzisela ukufinyelela i-Inthanethi.
Kubha lamakheli, thayipha http://192.168.0.1 or 192.168.0.1.
Ikhasi lokungena le-router yakho kanye nemodemu lizovela esikrinini.
Thumela ama-Id wokungena okuzenzakalelayo njengegama lomsebenzisi ngaphezu kwephasiwedi yekhasi lokumisa le-router yakho.
Umzuzu osuthumele amarekhodi wokungena ngemvume, uzongena ngemvume ekhasini le-web lokumisa ngokungeziwe uzokwazi ukuthi ungakwenza kanjani ukuguqulwa okufunwayo.
Ngabe awukwazi ukugcina umbiko ngemininingwane yokungena ngaphezulu kwamagama angukhiye?
Ukuhlola incwajana ethi Imiyalo
Uma uhlulekile ukukhumbula imininingwane yokungena ngemvume ye-192.168.0.1 ngemuva kwalokho kufanele uhlolisise iManuwali noma iBhokisi le-router. Ngaphezu kwalokho, kufanele uhlole uhlu lwama-router oluzenzakalelayo lwamagama abasebenzisi kanye ne-passkey yama-routers.
Setha kabusha i-Router
Uma ushintshe imininingwane yokungena okuzenzakalelayo ye-router futhi ungayinaki ngaleso sikhathi indlela ephezulu yokubuyisa ukuthola ukusetha kabusha i-router ngezilungiselelo ezizenzakalelayo empeleni ezibuyisela konke ukuguqulwa futhi kokuzenzakalelayo. Ukusetha kabusha i-router:
Thola into ekhonjiwe njenge-toothpick noma i-Pin bese uzama ukuthola inkinobho yokusetha kabusha kuma-routers emuva.
Okwamanje lapho uqaphela inkinobho encane eyimfihlo. Cindezela futhi ubambe iswishi okwemizuzwana eyi-15-20 ngento ekhonjiwe.
Lokhu kuzobuyisela konke ukuguqulwa futhi kubuyele kuzilungiselelo ezizenzakalelayo kanye namagama abasebenzisi / amaphasiwedi owaguqule. Ngakho-ke manje uzokwazi ukungena ngemvume ngokugunyazwa kokungena ngemvume okuzenzakalelayo.
Inani eliphelele lama-IP linamakheli acishe abe yizigidi ezingama-17.9, wonke abekelwe ukusetshenziswa kumanethiwekhi angasese. Ngakho-ke, i-IP yangasese ye-router ayidingi ukuthi ihluke.
Kuwo wonke amadivayisi kunethiwekhi i-router inika ikheli le-IP eligciniwe, noma ngabe liyisikhungo esisezingeni lebhizinisi noma inethiwekhi encane yasendlini. Onke amadivayisi kusistimu angaxhunyaniswa nenye igajethi kusistimu ngale IP yomuntu siqu.
Noma kunjalo, ikheli le-IP langasese alikwazi ukufinyelela kunetha. Amakheli e-IP omuntu kumele ahlanganiswe noMhlinzeki Wensizakalo Ye-Inthanethi, isb., I-Comcast, i-Spectrum noma i-AT & T. Ngakho-ke manje, wonke amathuluzi ahlanganiswe ne-inthanethi hhayi ngqo, ekuqaleni axhumeka ohlelweni, olunamathiselwe kwi-inthanethi, ngokuhamba kwesikhathi exhuma kwi-inthanethi enkulu.
Izigaba Ikheli le-IP Imeyili kwemikhumbi
Igama imeyili Iwebhusayithi
Setha umzila we-TP-Link
Bheka Amandla Esiginali ye-WiFi
Abasebenzisi Abamnyama / Vimba Abasebenzisi be-WiFi
Yini i-WiFi hotspot?
Lungisa izindawo ezifile ze-WiFi
Vikela Inethiwekhi Yakho ye-WiFi
Liyini ikheli le-IP elizenzakalelayo?
Kungani i-Intanethi yami ihamba kancane?
Yini Iminyaka Yami Manje
ungayithola kanjani i-router ezenzakalelayo ip
Ungayisetha kanjani kabusha i-router yakho kuzilungiselelo ezizenzakalelayo